I Barcelona dia malaza kokoa noho i Madrid ao amin'ny Instagram | Vaovao momba ny gadget
I Barcelona dia malaza kokoa noho i Madrid ao amin'ny Instagram
Instagram dia tsy isalasalana fa ny tambajotra sosialy amin'ny taona, tsy ho reraka aho milaza izany. Ary io dia taorian'ny nanohanan'ny Facebook sy ny "fiasa halatra" amin'ny Snapchat dia nanjary malaza amin'ny fomba bibidia. Izy io izao no tambajotra sosialy voalohany amin'ny resaka fitomboana sy ny hetsika, ary misy fiantraikany amin'ny lafin'ny teknolojia sy ny fiaraha-monina izany. Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, ny famakafakana ny fampiasana an'ity karazana tambajotra sosialy ity Mamela tahirin-kevitra mahaliana foana izy io, ary ny iray amin'ireo farany azontsika atao dia ny zava-misy fa malaza kokoa noho i Madrid i Barcelona ao amin'ny Instagram
Amin'izao fotoana izao i Barcelona dia eo amin'ny laharana fahavalo amin'ireo tanàna malaza indrindra ao amin'ny Instagram, miaraka amin'ireo hastagh 23.874.000 amin'ny fampiharana. Nandritra izay fotoana izay, laharana fahadimy ambin'ny folo ny renivohitra Espaniola miaraka amin'ny 16.700.000 XNUMX XNUMX voalaza.
Mahaliana ny mahita an'i Barcelona amin'ity lisitr'ireo tanàna malaza eran-tany amin'ny Instagram ityNa dia fantatsika aza fa i Espana dia iray amin'ireo firenena mandray mpizahatany betsaka indrindra isan-taona, dia tsy tokony hahagaga antsika izany. Ity angon-drakitra ity dia nomen'i Statista, izay nanokana ny fotoanany hamakafaka ny fomba nanisan'ny mpitsidika ny tanàna azy ireo ho tenifototra hametrahana ireo sary.
Amin'ny toerana telo voalohany isika New York, London ary Paris, telo amin'ireo tanàna mora tohina indrindra amin'ny "posture" izay azontsika an-tsaina. Mameno ny lisitra amin'ity baiko ity izy ireo: Dubai, Istanbul, Miami, Chicago, Los Angeles ary Moskoa.
Izy io dia afaka manamarika ny taloha sy aorian'ny fomba nanoratan'ny Madrilenianina ny sarin'izy ireo, azo antoka fa tsy hisy fiatraikany amin'ny avonavom-pireneny fa i Barcelona no tanàna malaza indrindra any Espana amin'ny tambajotra sosialy. Fantatrao, hampiroborobo ny tanànanao ao amin'ny Instagram mandritra ity taona 2017 ity, soraty ny "#RoquetasdeMar".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » I Barcelona dia malaza kokoa noho i Madrid ao amin'ny Instagram
Saripika tafaporitsaka vaovao an'ny Moto G5 vaovao ary amin'ity tranga ity dia toa Moto G5 Plus izy io